Ku farasinta fardaha iyo tartankooda talaabadan astaamaha ah | Fardaha Noti
Jenny monge | | Fardo, Tartanka fardaha, Fardaha fardaha
Qaar ka mid ah sinnaanta waxay leeyihiin socod dabeecad ah oo loo yaqaan trot oo soo jiitay taageerayaal badan si loo sinaado isboortiga iyo kuwa dhaqda. Tani ayaa sameysay Noocyada isku midka ah ee lahaanshahooda ayaa bilaabi doona in la raadsado. Tartanadaasi waxay ku dhammaadeen in loogu yeedho Trotter race ama fardaha lagu tumto.
Adduunyada isboortiga loo yaqaan 'Equine Sport' waqti dheer kuma qaadin inay qaataan talaabadan dabeecada ah ee lagu fulinayo tartamada, halka uu darawalku ku fadhiyo gaari nal ama xaga dambe ee xayawaanka.
Waqtigan xaadirka ah shaqooyinkani waxay leeyihiin a caan weyn ka ah Jasiiradaha Balearic iyo Faransiiska. Ma rabtaa inaad wax yar ka ogaato waxa ay ka kooban yihiin?
Kahor inta aynaan u gelin adduunyada loo yaqaan 'trotter', aan baranno sinaanshahan waxoogaa ka wanaagsan.
Booyado Isbaanishka ma ahan kuwa si fiican loo yaqaan, inkasta oo ay jiraan taageerayaal waaweyn oo ka jira Jasiiradaha Balearic. Hiwaayaddan ayaa ku bilaabatay nuqulo ka mid ah faras xabadka loo yaqaan 'chestnut trotter faras' iyo Anglo-Norman maroojisyo. Tani Waxay ahayd saldhigga Isboortiga Trotting Race, taas oo hadhow hiddo-wadeyaasha waddooyinka Ingiriisiga, Norfolk Roadster iyo fardaha Isbaanishka, Holland iyo Danmark ee kala duwan lagu daray.
In kasta oo uu tartan ahaa Waxaa loo sameeyay isir taranka, waxaa loo arkay inuu faa'iido u leeyahay shaqada goobta.
Waxaan afkeena ku kala fureynaa muuqaal tartan ah oo lagu qabtay Palma, halkaas oo aan ku qaddarin karno marinka isbarbardhigyadan:
Sida xiisaha loo qabo, waxaa jira heesta carruurta Isbaanishka oo ka hadlaysa faras la tumanayo.
1 Maxay yihiin cagajiidka Isbaanishka?
2 Maxay yihiin fardooleyda Faransiiska?
3 Tartanka suunka
3.1 Tartanka laxanka
3.2 Tartanka Trotter ee Spain
Maxay yihiin cagajiidka Isbaanishka?
Iskaraabyada Isbaanishka, oo dhererkoodu ku egyahay ilaa 150 ilaa 170 cm, waa xayawaan ballaaran, leh dhabarka iyo garbaha oo xoog leh. Muujinaya buraash xoogaa qasan. Adimihiisa dhaadheer oo xoog badan. Waxay kala yihiin lugaha-lugaha, dabeecad in noocyada kale loo tixgelin doono cillad. Waxay kaloo leeyihiin indho waaweyn oo aad u nool.
Sida dhogorta, badanaa waxay leeyihiin lakabyo sida xabadka iyo xabadka. Mararka qaarkood koofiyado cawl iyo madow sidoo kale waa la arki karaa, iyadoo qaar ka mid ah calaamado cad oo qarsoon addimada ama madaxa.
Ka sokow ahaansho caqli badan, way isku dheelitiran yihiin oo waxay leeyihiin dabeecad aad u sharaf badan.
Maxay yihiin fardooleyda Faransiiska?
Waxay dherer ku leeyihiin meelaha engegay ee qiyaastii ah 160cm. Waxay u egyihiin Dhisid adag oo adag, oo leh murqo aad u muruqsan iyo gadaal gaaban. Lugaha waa dherer, xoog iyo awood badan.
Waxay leeyihiin dabeecad wanaagsan, taas oo muhiim u ah isboortigan.
Koodhadhkoodu caadi ahaan wuxuu leeyahay jaakad, midab iyo laalaab midab leh
Noocan ah tartanka fardaha waxaa lagu sameeyaa iyada oo la korsado isleegyada socod gaar ah ama maro, iyadoo la jiidayo sulky (gaari laba-lugood leh). Waxaa jira waxyaabo ka reeban sida Faransiiska halkaasoo ay inta badan adeegsadaan gaari laakiin koorsada.
Meel kastaa waxay leedahay sharciyo u gaar ah oo ku saabsan xirfaddan noocan ah. Gudaha Harness (Waqooyiga Ameerika), waxay ku xaddidan yihiin fardaha Standardbred. Isbarbar dhigyadan ayaa loogu magac daray maxaa yeelay waxay markii hore ku tartami karaan hal mayl waqtiga caadiga ah. Waxay la mid yihiin dabeecad deggan, oo leh lugaha xoogaa ka yar tarbiyadda iyo jir ka xoog badan.
Tartanadaasi waxay ku lug leeyihiin istiraatiijiyad badan iyo orod marka loo eego tartamada kale. Waa lagu fulin karaa gudaha laba hawo oo kala duwan: orod ama orod. Jogger wuxuu ku dhaqaajiyaa addimmadiisa hore labo-geesood. Dhinaca kale, faras laxanka ayaa xubnihiisa u dhaqaajinaya dhinaca. Yurub gudaheeda, jinsiyadaha waxaa badanaa lagu ordaa oo keliya meherad lagu riixo, halka qaybaha kale ee adduunka qaabka laxanka sidoo kale lagu fulin karo.
Xaalada habdhaca, farduhu waa aan u nuglayn jaranjarooyinka maadaama ay badanaa qaadaan burooyin ama qufulo isku xidha lugaha. Sidoo kale, laxanka waa tallaabo dabiici ah oo loogu talagalay kalluumeysato badan.
Darawalka sulky wuxuu wataa jeedal uu u adeegsado inuu ku muujiyo faraska adoo taabanaya kuna qeylinaya usheeda dhexe. Si kastaba ha noqotee, meelaha qaar karbaash waa ka mamnuuc, sida laga sameeyo Norwey.
Cayaaraha natiijooyinka orodka oo xiiso weyn u leh Faransiiska, halkaas oo ay ku dhaleen fardahooda si ay u sooman yihiin. Fardahaas waxaa loo isticmaalaa ku tumashada, kursi tartanka iyo xarkaha.
Tartanka Trotter ee Spain
Tartanadan ku saabsan jaziiradda ayaa inta badan lagu qabtaa orodyada Mallorca, Menorca iyo Ibiza, taas oo ah, jasiiradaha Balearic.
Menorca waxay xiriir dhow la leedahay sinnaanta. Tartanada Trotter waxaa lagu qabtaa Isboortiga degmada ee Mahón maalin kasta Sabti ah bilaha xagaaga iyo Axadaha bilaha jiilaalka.
Waxay ku jirtay Hippodrome oo ka mid ah Aqalka Sare, sidoo kale ka yimid Menorca, halkaas oo Tartankii ugu horreeyay ee lagu ciyaaro ayaa la qabtay July 2, 1071. Jinsiyadaha sidoo kale waxaa lagu qabtaa tartankan bilaha Febraayo ilaa Oktoobar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Fardaha faras iyo jinsiyadooda